Ny OnePlus 7 Pro dia mandalo fitsapana mafy hahazoana tanjaka sy faharetana | Androidsis
Ny OnePlus 7 Pro dia mandalo fitsapana fiaretana henjana sy faharetana an'i JerryRigEverything
Ny smartphone voalohany avy amin'ny OnePlus monina any Shina, ny OnePlus 7 Pro, natomboka ora vitsivitsy lasa izay niaraka tamin'ny OnePlus 7, ary i JerryRigEverything's Zack dia efa nametraka izany tamin'ny alàlan'ny fitsapana ara-batana be loatra hanamarinana ny faharetan'ilay fitaovana.
Na dia miorina tsara aza ny finday, miaraka amin'ny fitaovana tsara kalitao, ny fitsapana izay ho hitantsika etsy ambany dia milaza amintsika ohatrinona ary hatraiza ny fahaizan'ny telefaona ny fitsapana maharitra izay nampiharana azy. Andao hojerena!
Toy izao ny fijoroan'ny OnePlus 7 Pro amin'ny fitsapana an'i JerryRigEverything
Manomboka amin'ny fitsapana ny rangotra izany ary, araka ny hitantsika, Manomboka mikorisa amin'ny ambaratonga 6 amin'ny ambangovangon'ny Mohs ny lamba filamatra, zavatra mitranga amin'ny ambaratonga toy izany noho ny fiarovana natolotry ny Corning's Gorilla Glass 6. Amin'ny ambaratonga 7, afaka manomboka mahita rut lalina kokoa ianao.
Ny fakan-tsary eo alohan'ny pop-up dia arovan'ny vera ihany koa izay tsy mora mamoritraFa ny faritra manodidina azy dia vita amin'ny plastika, izay mora tohina kokoa. Ny sisin'ny telefaona dia vita amin'ny vy, ao anatin'izany ny lovia karatra SIM, volume rocker, bokotra herinaratra ary slider fanairana.
Ny tontonana aoriana ao amin'ny OnePlus 7 Pro dia miaraka amin'ny Gorilla Glass 5, hiarovana azy amin'ny rangotras. Ny marika OnePlus sy ny marika marika dia apetraka ao ambanin'ny vera mba tsy hahafahan'izy ireo mivoaka mora foana.
Ankehitriny, rehefa tonga amin'ny fitsapana litmus, dia nahavariana ny efijery finday avo lenta. Tsy naseho tsy misy pixel maty rehefa afaka iray minitra teo am-panaovana ny lelafo misokatra mivantana. Raha ampitahaina, ny takelaka AMOLED hafa amin'ny ankapobeny dia maharitra 20 segondra monja mandra-pitrangan'ny fahasimbana pixel tsy azo sitrana.
Raiso ireo sary miavaka OnePlus 7 ao amin'ny 4K miaraka amin'ny Abstruct
Na dia simba aza ny vera eo an-tampon'ny efijery noho ny gorodona ambaratonga 7 Mohs, dia mbola mandeha ihany ny sensor an'ny dian-tànan'ny OnePlus 7 Pro. Ny telefaona koa dia nahavita tsara tamin'ny fitsapana flex, tsy mampiseho fisarahana na vala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny OnePlus 7 Pro dia mandalo fitsapana fiaretana henjana sy faharetana an'i JerryRigEverything
Google Photos dia hitsahatra amin'ny fampifanarahana amin'ny Google Drive manomboka amin'ny Jolay
Ny Google Translate dia mampiasa ny fahitana fiteny mandeha ho azy amin'ny maody fakantsary